Raad Raac News Online – WAREYSI: Mo Farah Oo Ka Hadlay Arsene Wenger, Kulanka Bayern Munich, Iyo Inuu Ku Ciyaari Doono Emirates.
WAREYSI: Mo Farah Oo Ka Hadlay Arsene Wenger, Kulanka Bayern Munich, Iyo Inuu Ku Ciyaari Doono Emirates.
Orodyahanaka labada bilood ee Olimbikada ku guuleystay Mo Farah asalkiisana Soomaaliga yahay ayaa ka mid ah taageerayaasha ugu caasan ee kooxda Arsenal, waxaana uu maanta wareysi dheer siiyay Eurosport isagoo kaga hadlayay arimo badan oo Arsenal la xiriira.
Laacib.net idiin soo tarjunay wareysiigii uu Mo Farah siiyay Eurosport oo u dhacay sida tan:
Maxaad u noqotay taageere Arsenal?
Markii aan da’ yaraa waxaa jeclaa kubada cagta, waqtiga intiisa badan waa daawan jiray, Waxaan ku ciyaari jiray garoomada yaryar sida wiilasha dhan ay sameeyaan, waxaana ku riyoon jiray inaan maalin uun xirfadle ku noqdo. Waan u ciyaaray koox xaafadeyda ka dhisan, laakiin waxaan markii danbe ogaaday inaan orodka ku fiicanahay. Xilligii Arsenal ay isoo jiidatay waxa ay aheyd finalkii FA Cup ee 1993dii. Arsenal ayaana 2-1 kaga badisay Sheffield Wednesday ciyaar ku celis aheyd, Ian Wright ayaana labada kulanba shabaqa soo taabtay.
Ilaa iyo intee ayaad isku dhowdihiin kooxda iyo ciyaartoyda?
Madaama aan hada ku noolahay Mareykanka sidii aan jeclaa uguma dhawi. Sidaasi darteed ma ahi qof leh tiketka xilli ciyaareedka oo dhan. Ka dib ciyaarihii Olimbikada waxaan daawaday kulamo qaar oo kooxda ayaan marti u ahaa, waxaana galay gudaha garoonka. Waxaan la kulmay ciyaartoy badan qaar kalena waxaana ku xiriirnaa fariinta qoraalka oo nasiib wanaag isaga rajeynaa.
Akoonkaaga Twitter waxaa soo dhigtay sawir tababaraha Arsenal Arsene Wenger uu kor u qaadayo gabadhaada Caa’isha, mid ka mid ah mataanadaada. Sidee taas ku dhacday?
Taas waa maalintii la igu casuumay ciyaarta, si fiican ayaana la iila dhaqmay. Waxaan ahaa sida wiil yar. Arsene waxaan ku arkay tunnel-ka, horena waan u kulanay sidaasi darteed waxaan bilownay inaan sheekeysano. Markaan kama aysan dheereyn markii ay mataanaheyga ii dhasheen, sidaasi darteed waxaan doonayay inaan sawir isaga iyo gabdhaheyga ah helo.
Tababaraha Manchester United Sir Alex Ferguson waxa uu u balanqaaday Usian Bolt inuu ciyaar baashaal ah ku ciyaari karo Old Trafford sannadkan. Adiga taas ma ka codsatay Wenger inaad ku ciyaarto Emirates?
Hadda ka hor kooxda tababar waan la qaatay, wuuna i arkay anigoo ciyaaraya. Hadii fursad sidaasi oo kale ay soo baxdo si dhab ah ayaana uga fiirsan doonaa.
Waa maxay fekerkaaga la xiriira xiddiga Jarmalka Lukas Podolski?
Waxaan qabaa in waqti yar ay ku qaadaneyso inuu saldhigto. Kubada Inagriiska waa ka duwan tahay tan laga ciyaaro meel kale, waa ka dhaqsi badan tahay. Waxaan arkaa inuu horumar u sameyn doono sida Dennis Bergkamp uu u la qabsaday Arsenal. Sidaasi darteed waxaan arki doonaa ciyaartiisa ugu fiican xilli ciyaareedka soo socda, waxaana uu inoo noqon doonaa ciyaaryahan weyn.
Taageere kale oo caana oo Arsenal ah Spike Lee oo aflaamta sameeya, ayaa dhawaan dhaleeceeyay Gunners isagoo yiri: “Waa inay lacag qarashgareeyaan islamarkaana ciyaartoy helaan.” Sidee ku sharaxi kartaa dhibaatada ay ku jiro Arsenal. Waa 7 sanno iyo bar koob la’aan ah.
Dhamaanteen waan jecel nahay inaan koob ku guuleysano sannad kasta laakiin taas ma dhici karto. Waxaa ina soo dhaaftay 7 sanno oo koob la’aan ah, laakiin kooxo qaar 70 sanno ayaa soo dhaaftay. Taageere ahaan waa inaad garab istaagtaa kooxda islarmarkaana aad rajeysaa in wax walba ay hagaagayaan. Waxaan dhawaan heshiis ka saxiixanay ciyaartoy da’ yar hadii ay dhamaantood horumar sameeyaan, koox fiican ayaa soo baxeysa.
Waa Maxay fekerkaaga la xiriira Bayern Munich? Ma jiraa ciyaaryahano Bayern oo aad xiiseyso?
Dad badan oo England jooga kama war qabaan sida ay u weyn tahay Bayern Munich. Waxaan maqlay warar sheegaya in milyan taageerayaal ah ay Munich joogeen finalkii sannadkii hore…. taasna waa taageerayaal badan! Kooxdooda waxaa ka buuxa ciyaaryahano waa weyn, laakiin waxaan isha ku heyn doonaa Franck Ribery iyo gaar ahaan Arjen Robben. Robben hore ayuu dhibaatooyin inoogu abuuray, waxaana u baahanahay inaan orodkiisa yareyno. Arsenal maalinta ay u saaran tahay waxa ay garaaci kartaa koox kasta, laakiin waxaan u baahanahay inaan niyad wanaag muujino oo si wacan ku bilaabano. Inta badan dhawaanahan waxaan si fiican u ciyaarnaa marka hal gool ama labo la inagula leeyahay.
Waa maxay saadaashaada ciyaarta Bayern Munich?
Sadaasheyda waxa ay noqoneysaa 2-1 oo Arsenal ay ku badineyso ciyaarta Emirates, ka dib 1-1 kulanka martida aan nahay, sidaasi darteed wadar ahaan Arsenal ayaa ku soo bixi doona 3-2. Theo Walcott ayaa gool Munich ku dhalin doona oo na soo saari doona.